Senator Muuse Suudi Oo War Ka Soo Saaray Dhacdadii Dadka Lagu Laayay Ee Gololey – Banaadir weyne
Senator Muuse Suudi Yalaxoow oo ka hadlayay dhacdadii dadka lagu laayay ee ka dhacday Deegaanka Gololeey ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in mas’uul xil ka qaadis ka baqaya aan la sugeyn inuu keenayo xaqiiqda dhabta ah ee baaritaanka dhacdadaas.
Muuse Suudi ayaa sheegay in labo dhacdo oo xanuun leh deegaankaas ay ka dhaceen oo mida ugu horeyso ay ahayd qarax miino oo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda oo deegaanka marayay, waxaana ku dhintay 9-askari, waxaana ka dib la maqlay dhacdadii kale ee xanuunka badneyd ee lagu dilay 9 dhalinyaro ee ahaa howlwadeenada caafimaad.
Senator Muuse ayaa hoosta ka xariiqay in arrintan loo saarin karin Al-Shabaab kaliya, balse ay u baahan tahay baaritaan dhab ah, islamarkaana gacmo kale ay ku lug leeyihiin.
Hay’adaha caalamka gaar ahaan kuwa caafimaadka ayuu ugu baaqay iney soo farageliyaan arrintaan oo baaritaan la hubo ay sameeyaan si loo helo dadka si arxandarada ah u dilay dhalinyaradaas mustaqbalka lahaa.
Inkastoo si dhab ah loo ogeyn cida falkaas ka dambeyso, hadana waxaa la isla dhexmarayaa in Ciidamada Dowladda Federaalka ay ka dambeeyaan dilka howlwadeenadaas caafimaad. – Shaaciye News